Aqalka Sare oo sheegay iney sameynta sharciyada u dedejiyaan si la mid ah Golaha Shacabka – Kalfadhi
Hab-dhowraha Aqalka Sare, Cabdikaafi Sheekh Xassan, ayaa warbaahinta la wadaagay waxyaabihii looga hadlay kulanka Guddiga Joogtada ah iyo Guddoomiyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi ee maanta ka dhacay Xarunta Golaha, waxa uuna xusay in si fiican loogu falanqeeyey safarkii uu Guddoomiye Cabdi Xaashi uga soo qeyb-galay dalka Turkiga shirkii Baarlamaanka Aduunka ee halkaas ka dhacay.
“Shirkii Turkiga waxaa looga hadlay caasimadda Qudus iyo shacbiga Falastiin, waxaana ku kulmay 70 Dowladood” ayuu Hab-dhowruhu ku yiri suxufiyiinta. Waxaa, isaga oo si kooban uga warbixinayay kulanka Guddiga Joogtada ee Golahaa uu la yeeshay Guddoomiyaha Aqalka Sare, uu sheegay in isu imaatinka, sidoo kale, looga hadlay diyaarinta ajandaha soo socda. “Ajandaha kale Waxaa uu ahaa diyaarintii Ajandaha Kulanka 13-aad ee Golaha Aqalka Sare iyo waxyaabaha lagu qaban lahaa” ayuu yiri Cabdikaafi Sheekh Xassan.
Hab-dhowraha Aqalka Sare waxaa wax laga weydiiyay dhaliisha ah in aysan dedajin sharciyada uga yimaada Golaha Shacabka, ee hor yaala Aqlka Sare. “Baarlamaanka hadda waa laba aqal: Aqalka Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare. Waxaan wajahnaa hadba sida ay duruuftu tahay” ayuu ku jawaabay Hab-dhowraha Aqalka Sare, Cabdikaafi Sheekh Xasan. “Golaha Shacabka sida uu wax u soo dadajiyo ayaan anagana wax u dadajinaynaa” ayuu sii raaciyey hadalkiisa.
Kulanka Guddiga Joogtada ee Golaha Aqalka Sare waxaa qeybta hore shir-guddoominayay Guddoomiyaha Golaha, Cabdi Xaashi Cabdullaahi, laakiin qaybta dambe, waxaa shir-guddoominayay Kuxigeenkiisa 1-aad, Abshir Bukhaari, waxaana sababay in Guddoomiyaha Aqalka uu aaday shaqo kale, oo si deg deg ah kusoo gashay, sida uu sheegay Hab-dhowraha.